ချစ်သူ့ အ်ိမ်ကလေးမှကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ.. - ကဗျာများ
ပင်မစာမျက်နာအချစ်ဗေဒင်တွက်ရန်ချစ်တတ်သူများမိန်းမလှကျွန်းအချစ်ဆရာကြီးFlash songsFlash songs ဆိုင်ရာAdmins & FB Membersချစ်သူသီချင်းတောင်းကဏ္ဍRing Tone Canter များကဗျာများဂီတသံဇဉ်လေးများ ဖန်တီးမယ်။ချက်ရွှန်းခန်းသရဲအကြောင်း(ပင်မ)သရဲအကြောင်းစာမျက်နာ(၁)သရဲအကြောင်းစာမျက်နာ(၂)သရဲအကြောင်းစာမျက်နာ(၃)သရဲအကြောင်းးစာမျက်နာ(၄)သရဲအကြောင်းစာမျက်နာ(၅)သရဲအကြောင်းစာမျက်နာ(၆)သရဲအကြောင်းစာမျက်နာ(၇)ဟာသများ(၁)ဟာသစာမျက်နာ(၂)GTALK မှ custom message စုစည်းမှုများGtalk စာသားစုစည်းမှု (၂)ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ဘောလုံး ကဗျာများရသများဆန်ကြယ်မှုအထွေထွေ။
1 Comment 1 Comment ရည်ရွှယ်ရာ 03/18/2013
1 Comment 1 Comment အချစ် နိဂုံး 03/07/2013
2 Comments ဖြူပါတယ်........ဖြူပါတယ်........နင်အချစ်က ဖြူစင်လွန်းပါတယ်.....ချစ်တာထက် မြတ်နိုးတတ်သည်အနှစ်မပါတဲ့အချစ် က အသစ်တွေ ထက်တလဲလဲ ၀တ်ပြနေမှ စစ်မှန် မှာတဲ့ဗျာ....ခံပြင်းစရာ..... ဟင်( သက်ပြင်းလေးခိုးချသည်)ပျော်စရာ မပါတဲ့ အချစ်တွေပါ...နေ က ညို ပြီး အချိန်က တို လိုပါဘိ အချစ်အတွက် စစ်ခင်းဖို့ ငါမှ လက်နက် အလုံအလောက် မရှိပါလာ....ငါ လဲ ...........ဒီကောင်ကြီးလဲ.............ချစ်တတ်ပါတယ်ဟာ............အချစ်စစ်ရဲ့နိဂုံး ကရင်ထဲ အောက်သတ်သတ်ကြီးနော်......*****************************************ရင်ထဲရှိတာလေးရေးချမိတယ်နေမင်းသူ(သထုံသားလေး)ချစ်သူအိမ်ကလေး http://chitthueainkalay.weebly.com
2 Comments ပန်းရွှေ ပိတောက် 03/07/2013
0 Comments ရနံသင်းမြိုင် ထုံမွေးကြိုင်လေ ရွှေဝါရောင်လန်း ခိုင်လုံးလန်း၏ ပိတောက်ရွှေဝါ ပွင့်ချီသာသည် လေယူရာယိမ်း ယိမ်းနှမလေးနွယ်...... ရွှက်ဟောင်းလဲကြွေ ရွှက်သစ်ဝေလို့ယိမ်းသမ အက ဆန်းလှပါပြီး ဧပရယ်မေလေး နွဲ့ ဟန်ပြင် အတာကြူသည့် တန်ခူး လ ဆိုဘဲ...... ဥသြငှက်လေး တွန်ကြူးချိန်ခါ အသံသာသာ လွမ်းစရာလေးမို့အော် ဒီအချိန်က.... ပိတောက်တွေလဲ စုံနေပြီးလေ...... ပိတောက်ပန်းခိုင် ပင်စည်တိုင်မှာ ဆွဲကာရစ်ပတ် ပန်ဆင်အပ်သည့် ရွှေဝါရောင်သား သနပ်ခါးလေးနှင့် လုံမပျို လေး ဆံတုံးစံ....... နေမင်းသူ(သထုံသားလေး) ချစ်သူအိမ်ကလေး www.chitthueainkalay.weebly.com
Add Comment ချစ်စိတ်ကူးလေးယဉ်ခဲ့တယ် 03/06/2013
2 Comments ချစ်စကားလေး ရင်မှာ တည့် နှစ်ဦးသားရင်မှ ၊ ချစ်စိတ်ဝင်လို့ ဒီရင်ဘက်ထဲက ချစ်စမ်းချောင်းလေးက မင်းလေး ရင်ထဲ စီးဆင်းလို့ ဝင်...။ "ဘ၀" ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ် မို့ ..။ ရှေ့ ဆက်လျှောက်လှမ်း ခရီးကြမ်းကို ပန်းချီ ဆေးသား လှလှလေးတွေ တူတူရေးစပ်ကြမယ်လေး...။ မိုးကလေးက ဆွေ ၊ တိမ်ကလေးက ညို သံဇဉ်လေးကချိူ ၊ ကော်ဖီးလေးက ခါး မလိုင်ဖတ်လေး မျောနေတယ် "ချစ်ရသူ" အဆင် သင့် လိုက်တာနော်..။ ဥသြက တွန့်၊ "ခါ" ကလေးက သာ မြိုင် ကလေးကစိမ်း ၊ စမ်းကလေးက သာ တောင်တန်း လေးနဲ မိုးထားတဲ့ အိမ်ကလေး... အေးချမ်းလိုက်တာနော်...။ သူလေးအနားကပ် ၊ ပုခုံးဖက်၏ ဒီထက်အနားတိုး ၊ ပါး ပြင်အိလေးအပေါ် ငါ၏ နုတ်ခန်း စိုက်ကာနစ်ဝင်သွားဖို့ပြင်..။ ဘုန်း အားးးး ငါ အိမ်မတ် မတ်နေပါလား... အဟီး..။ နေမင်းသူ(သထုံသားလေး) အတွေးလေးပေါ်လာတာနဲ ဟသ ဆန်ဆန်လေးရေးမိလိုက်တာပါ.. မှားတာပါရင် သည်းခံပြီး ဖတ်ပေးကြပါလို့..
2 Comments March 06th, 2013 03/06/2013
0 Comments “ပုရစ်ဖူးဝေစီ နွေဦးရောက်ပြန်ပြီ” …………………………………………. ဝါကြင်ကြင်ရွက်ဟောင်းတို့ရဲ့စီးချင်းရိုက်သံ စိမ်းစိုစိုနုနုရွရွ ရွက်သစ်တို့ရဲ့ဝီရိယအင်အား အတက်အဆင်းလှေခါးထိပ်မှာကအဘွားအိုနှင့်သူငယ် ယှဉ်ပြိုင်မှုအားအင်တွေကလှိုင်းလုံးပမာ မြင့်တက်လေမလား နိမ့်ကျလေမလား သန်ခေါင်ယံဖားအော်သံကဇာတိပြပုံရိပ်လို မျက်နှာသစ်ချိန်ပြောင်းလဲနေပါပြန်ပြီကော အိပ်ယာထနောက်ကျခဲ့ခြင်းမဟုတ်တန်ရာ သူ့ထက်ငါ အလုယက်တွေနဲ့ ထ ထပြေးနေရ နောက်ကျ ကျန်ခဲ့ရလို့ပြန်မထနိူင်တဲရက်တွေ ပြန်လှည့်ကြည့်ရင်တောင်စိတ်တွေမောလို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းချွေးသံရွဲရွဲနဲ့ ကြွက်ကြွက်ညံနေတဲ့လက်ပံပင်ထိပ်ကဆက်ရက်အုပ်စု အမောပြေသောက်ဖို့ကြံရွယ်ပြီးရေအိုးကိုလှန်လှောကြည့် အော်………………………… သူ့အချိန်…သူ့နေရာ…သူ့ဇာတိကပြသနေရော့ပါလား ဟူး……………………….. နွေဦးရောက်နေပါပြီလေ….။ ။ ဇွဲမာန်(အင်းဝ) ချစ်သူအိမ်ကလေး www.chitthueainkalay.weebly.com
Add Comment "ဂန္တဝင်လက်(သို့)အမေ" 03/06/2013
0 Comments "ဂန္တဝင်လက်(သို့)အမေ" .................................... ပင်မစာမျက်နှာသစ်မှာထိပ်ဆုံးမှာရပ်လို့ ရင်ခွင်ကိုဖွင့်လစ်ပြီးလမ်းလျှောက်နေခဲ့သူ နောက်ကျောကလှံထောက်မှာကိုမကြောက်ဘူးတဲ့ ရှေ့ကသွားနေတဲ့ရင်သွေးငယ်ကိုပျောက်သွားမှာစို့လို့ဆိုပဲ တရံတခါချော်ကျမိတဲ့နေ့တွေရှိပေမယ့် ထိုင်ငိုင်ပြီးအနာကိုမခံစားချင်ဘူး ရင်သွေးငယ်နောက်ပြန်လှည့်မိမှာစို့ရိမ်တယ်လေ သွားရမည့်ခရီးကအသစ်ဆန်းဆိုပေမယ့် အားအင်မလျှော့ပါဘူး........... ခွန်အားသစ်တွေနဲ့လမ်းသစ်ကိုထွင်နေတယ် လျှောက်နေ့တဲ့ဆဲဆဲမှာခြေကျော်မိတာတွေကို ပွဲကြည့်ပရိတ်သက်ကခွင့်လွတ်နားလည်ပေးပြီး ရင်သွေးငယ်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုနေပြီလေ မကြာတော့ဘူးထင်ပါတယ် သားကောင်း/သမီးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ပရိတ်သက်ကလည်းဝိုင်းဝန်းပေးနေခဲ့တာမဟုတ်လား ဒါပေမယ့်........................ တခါတခါရင်သွေးငယ်ကဆိုးသွားလိုက်ရမ်းကားလိုက်နဲ့ ထိမ်းမရသိမ်းမရဇာတ်အိမ်တွေနဲ့ပေါ့ အမေတစ်ယောက်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုအကုန်မသိတဲ့ ရင်သွေးငယ်တစ်ယောက်ခံစားချက်တွေပေါက်ကွဲပြီထင်ပါရဲ့ ဟုတ်တယ်................... တကယ်တော့နွေးထွေးတဲ့ဂန္တဝင်လက်နဲ့သိုင်းခြုံပြီး ရင်သွေးငယ်ကိုထွေးပိုက်ထားတဲ့သူက................ ကမ္ဘာမြေကိုလှပတဲ့ဥယျာဉ်အသွင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့ ဂန္တဝင်လက်ရဲ့အရှင်"အမေ"ပါပဲ...။ ဇွဲမာန်(အင်းဝ) ချစ်သူအိမ်ကလေး http://chitthueainkalay.weebly.com/
Add Comment မြန်မာ့ connection 03/03/2013
3 Comments မီးပျက်ချိန်ဆို ၊ connection ( ကွန်နရှင် ) ကောင်း လို့မသုံးရလို တင်းမိတယ်...။ မီးလာပြန်သော် ၊ ပျော်မဆုံး ရွှေလိုင်းတော်ကြီး လေးလှတယ်... မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ ၊ ကွန်နရှင်လေးနဲ့gtalk လေးထဲ ၀င်မိတယ်...... ၀င်တုန်းခဏ sign in ပြလို့ပြီးတော့ connecting ပြန်ပြတယ်..။ အားကျမခံ facebook ၀င်ပြီး ကောင်မလေးများ လျောက်ကြည့်မယ.်.. သူလဲ ဗလာ ဖြူ မျက်နာနဲ့loading လေးက ပြောင်ပြတယ်..။ :D အချိန်လေး စောင့်တယ် တတ်မလား ပေါ့ :-( dota လေးတစ်ပွဲ ခုတ်ဖြစ်တယ်..။ တစ်ပွဲပြီးလဲ သူမလား နှစ်ပွဲပြီးလားသူမလား... အဲဒါမှ မြန်မာနိင်ငံ connection ပါလေ.... :-) နေမင်းသူ(သထုံသားလေး)3Comments မွေးမြေ ဒေသလေးမှ အစပြု၍ 02/28/2013
0 Comments မွေးမြေ ဒေသလေးမှ အစပြု၍ ဤဒေသလေးဝယ်...သူမြေတွင်စိုက် ၊ သူ့ အားအသုံးခံထိုပင်ပွင့်ဖူး ၊ မြူထူး၇ွှင်ပျော်သူမြေသီးစား ၊ သူအားဆက်နွယ်သူေ၇ကိုသောက် ၊ ခါသီသွယ်ငါသည်ကြီးပြင်းလာပါတကား....။ ဤဒေသလေးဝယ်...မိဘအသွင် ၊ ချမ်းအေးမြမြဒီမြေမျိုးမှ ၊ ငါမွေးရပ်မြေရန်သူ ဟုသည် ၊ ၊ ဘယ်ဟာမသိကောင်းမှု ကိုသာပြုသည်မြေ မို့ ၊တရားရိပ်တွင်မွေ့ (လျော်)..။ ဤဒေသလေးဝယ်...ကားရယ်မ၇ှိ ၊ ရထားမဲ့မြေထိုသည်အရာ မ၇ှိပါလဲခရီးရယ်ဆက် မြန်။ ဤဒေသလေးဝယ်...စိမ်းလှဲ့ မြမြ ၊ တောတောင်ငယ်တောဖျားခေါင်စပ် ၊ ချောင်ကျအရပ်မို့ အသံကြယ်ကြယ် ၊ ငှက်ငယ်ငယ်ပုစဉ်ရင်ကွဲသံက ဆူဆူညံလှပါဘိ။ ဤဒေသလေးဝယ်...တောရိပ်ဝါးရိပ် ၊ အုပ်ဆိုင်းအငွေ့ မြူချူံနွယ်ပိတ်ပေါင်း ၊ ထူထက်ခက်လို့ နေမင်းကြီးရယ် ဘယ်မှာတုန်းအော်ခေါ်နိူးလိုက်ပါစမ်း ၊ စော်အောသံ။ ဤဒေသလေးဝယ်...အလှူအတန်း ၊ သဒ္ဒါ ထက်သံမေတ္တာပေါပေါ ၊ ထိုအရပ်မြေအကူညီရယ် ယူစမ်း ၊ အနောင်တော်။ ဤဒေသလေးတွင်သာ..ငါမွေးဖေဖေ ၊ မွေး မေမေကမွေးဖွားပေးသည် ၊ ငါ မွေးရပ်မြေငါအတွက် တန်ဖိုး ၊မဖျက်နိင်ခြေမို့ အေးချမ်းလှ ၊ အေးလှပါဘိလေး။
Add Comment ♣♣♣♣♣ ။♣ ♣ ♣ ။ ရင်ထဲကဆူး ။ ♣ ♣ ♣ ။ ♣♣♣♣♣ 02/28/2013
1 Comment အိမ်မက်သည်......ကဗျာ...။ကဗျာသည်.......အသက်...။စိတ်ကူးတွေ...အချစ်ဖြစ်ပါစေသား...။သူသည် အချစ်...။သူ့ အချစ်သည်.. ငါ့ ကမ္ဘာ...။သူ့ ပါးလေး နမ်းရှိုက်မိပါစေသား...။အနမ်းသည်က ...ပန်းပန်းလေးလိုက လှသည်သူ့ အချစ်တွေရင်မှာဆူးနှစ်ပါစေသား။
1 Comment ချစ်သူအိမ်ကလေး
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..ဒီစာမျက်နာမှာ..မည်သူ့ မဆိုဖတ်နိုင်သည်။ ရေးနိုင်သည်.။ကူးယူဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ဝေဖန်နိင်ပါသည်.
facebook page of chitthueeainkalay!